Bible Mu Nsɛm Yosef Sɔ Ne Nuanom Hwɛ - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
YOSEF pɛe sɛ ohu sɛ ne nuanom mpanyimfo 10 no da so kura atirimɔden adwene. Enti ɔkae sɛ: ‘Moyɛ akwansrafo. Moaba sɛ mobɛhwɛ ɔkwan a mubetumi afa so abɛfa yɛn man yi.’
Wɔkae sɛ: ‘Dabi, ɛnte saa. Yɛn ho nyɛ hu. Yɛn nyinaa yɛ anuanom. Ná yɛyɛ 12. Nanso yɛn mu biako nni hɔ bio, na nea osua koraa no ne yɛn papa wɔ fie.’
Yosef yɛɛ sɛnea onnye wɔn nni. Ɔde wɔn nua a wɔfrɛ no Simeon no kɔtoo afiase, na ɔmaa wɔn a aka no de aduan san kɔɔ fie. Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Sɛ moresan aba a, momfa mo nua a osua koraa no mmra.’
Bere a wɔsan kɔɔ fie wɔ Kanaan no, anuanom no kaa nea esii nyinaa kyerɛɛ wɔn papa Yakob. Yakob werɛ howee. Osu kae sɛ: ‘Yosef nni hɔ bio, na Simeon nso kɔ. Meremma momfa me ba Benyamin a ɔyɛ kaakyire no nkɔ.’ Nanso bere a wɔn aduan no fii ase sɛ ɛresa no, na ɛsɛ sɛ Yakob ma wɔde Benyamin kɔ Misraim na wɔatumi anya aduan bio.
Yosef hui sɛ ne nuanom no reba. N’ani gyei sɛ ohuu ne nua kumaa Benyamin. Nanso na wɔn mu biara nnim sɛ saa nipa titiriw yi yɛ Yosef. Afei Yosef yɛɛ biribi de sɔɔ ne nuanom 10 no hwɛe.
Ɔmaa ne nkoa no de aduan hyehyɛɛ wɔn nkotoku no amama. Nanso bere a wonnim no, ɔma wɔhyɛɛ da de ne dwetɛ kuruwa kɔhyɛɛ Benyamin kotoku mu. Bere a wɔn nyinaa siim na wɔkɔɔ kakraa no, Yosef somaa ne nkoa dii wɔn akyi. Wɔkɔtoo wɔn no, nkoa no kae sɛ: ‘Dɛn nti na moawia yɛn wura dwetɛ kuruwa no?’
Anuanom no nyinaa kae sɛ: ‘Yenwiaa ne kuruwa. Sɛ muhu kuruwa no wɔ yɛn mu bi nneɛma mu a, munkum saa nipa no.’
Enti nkoa no hwehwɛɛ wɔn nkotoku no nyinaa mu, na wohuu kuruwa no wɔ Benyamin kotoku no mu, sɛnea wuhu wɔ ha no. Nkoa no kae sɛ: ‘Mo nyinaa betumi akɔ, na Benyamin de, yɛne no bɛsan akɔ.’ Dɛn na n’agya mma 10 no bɛyɛ afei?
Wɔn nyinaa ne Benyamin san baa Yosef fi. Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom no sɛ: ‘Mo nyinaa mubetumi akɔ fie, na Benyamin de, ɛsɛ sɛ ɔtra ha sɛ m’akoa.’
Afei Yuda kasae, na ɔkae sɛ: ‘Sɛ mekɔ fie na abofra no nka ho a, me papa bewu efisɛ ɔpɛ n’asɛm yiye. Enti mesrɛ wo, ma mentra ha sɛ w’akoa, na ma abofra no nkɔ fie.’
Yosef hui sɛ ne nuanom no asakra. Wɔnyɛ atirimɔdenfo sɛ kan no. Ma yɛnhwɛ nea Yosef yɛe afei.
Adɛn nti na Yosef kae sɛ ne nuanom yɛ akwansrafo?
Ɛyɛɛ dɛn na Yakob maa ne kaakyire, Benyamin, kɔɔ Misraim?
Ɛyɛɛ dɛn na Yosef dwetɛ kuruwa no kɔhyɛɛ Benyamin kotoku mu?
Dɛn na Yuda kae sɛ ɔbɛyɛ na ama Benyamin atumi akɔ fie?
Yɛyɛ dɛn hu sɛ na Yosef nuanom no asakra?
Kenkan Genesis 42:9-38.
Ɔkwan bɛn so na asɛm a Yosef kae wɔ Genesis 42:18 no boa wɔn a dwumadi hyehyɛ wɔn nsa wɔ Yehowa asafo mu no nnɛ? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)
Kenkan Genesis 43:1-34.
Ɛwom sɛ Ruben ne abakan de, nanso yɛyɛ dɛn hu sɛ Yuda na ogyinaa ne nuanom ananmu kasae? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Be. 5:2)
Dɛn na Yosef yɛe a ɛdaa adi pefee sɛ na ɔresɔ ne nuanom no ahwɛ, na adɛn nti na ɔyɛɛ saa? (Gen. 43:33, 34)
Kenkan Genesis 44:1-34.
Esiane sɛ na Yosef mpɛ sɛ oyi ne ho adi kyerɛ ne nuanom nti, eduu baabi no ɔyɛɛ n’ade dɛn? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)
Dɛn na Yosef nuanom no yɛe a ɛkyerɛe sɛ wɔn ani mmere no bio? (Gen. 44:13, 33, 34)